Puntland oo War ka soo saareysa qiima kororka Gaaska Cuntada | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Puntland oo War ka soo saareysa qiima kororka Gaaska Cuntada
written by warsan radio 01/02/2022
Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga dowlad Goboleedka Puntland Cabdullaahi Cabdi Xirsi ayaa sheegay inay War kasoo saari doonaann qiima kororka la sheegay in uu ku yimid sicirka Gaaska cuntada, kaas oo siweyn looga hadal haayo degaannada Puntland.
Qoraal kooban oo uu Wasiirku la wadaagay dadweynaha ayuu ku sheegay in cabashada la xiriirta qiima kororka Gaaska cuntada ay baaritaan ku sameeyeen, isla markaana ay kasoo saari doonaan Go’aan u wanaagsan Bulshada Puntland.
“Maalmahan waxaa socday cabashooyin la xiriira qiimaha gaska cuntada. Waxaanu sameynay baaritaano. Waxaana soo bixi doona war bixino wanaagsan ay soo saarayaan wasaaradaha u xilsaan arinta gaaska” ayuu yiri Wasiirka.
Dhowr jeer oo hore ayaa Wasaaradaha kala duwan ee Puntland waxaa ay beeniyeen in qiima koror uu ku yimid Gaaska Cuntada, oo maalmihii la soo dhaafay lagu baahinayay Baraha Bulshada.
Puntland oo War ka soo saareysa qiima kororka Gaaska Cuntada was last modified: February 1st, 2022 by warsan radio
Xiisad dagaal oo ka taagan degaan ka tirsan gobolka Galgaduud
DAAWO DOORSHADA KGS OO 14 MAALIN LAGU DAREY KA DIB IS CAILAADII GUDIGA DOORASHADA
Lafta-gareen oo Magacaabay Guddoomiye ku-xigeenka Gargaarka ee Gobolka Bakool